अरबपति भगवान युद्ध उपन्यास अध्याय 2443 - ० | | XperimentalHamid
अरबपति भगवान युद्ध उपन्यास अध्याय १2443 - - १2444
पढ्नुहोस् अध्याय २ 2443 १-२ 2444 २ उपन्यास अरबपति भगवान को युद्ध (अनुवादित संस्करण) को नि: शुल्क।
आकाश अचानक विस्फोट भयो, र गर्जन तुरुन्तै खस्यो, भुइँमा एक प्वाल।
मानौं यो क्षणमा भगवानले पनि तनाव महसुस गर्न सक्नुहुन्छ!
"हाहााहा, मेरो लागि पर्ख? म तिमीलाई मार्न कुर्नुहोस्! " को
दानव राजा हास्यास्पद, उसको आँखा बन्द, र डबल विद्यार्थी देखा!
जिiang निingले त्यस्तो आशा गरेनन् कि राक्षस राजाको शेष आत्मा त्यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो कि उनले ब्वाँसोको शरीरलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको थियो, र ब्वाँसोको विशाल पुत्रासमेत शैतानले प्रयोग गर्यो।
एक पटक ऊ पूर्ण रूपमा बलमा फर्किए पछि मलाई डर छ कि केही मानिसहरूले उसलाई रोक्न सक्छन्।
"त्यसोभए तिमी मार्न आउँछौ!"
ज्याiang निing आफ्नो मुट्ठी तान्न र चिच्याए।
केहि छैन? क्सी बन्द प्रेम मन फ्लिक गर्न को लागी मन प्यार? Hesitate, शैतान सारियो!
उसको खुट्टाको मुनि अलि पूरै व्यक्ति आँधीबेहरी जस्तै थियो, जमिन बालुवा र धूलोले भरिएको थियो, र एक आँधीबेहरीले भर्खरै बढेको सबै कोमल घाँसहरू नष्ट गर्न बाध्य पारियो!
उसको शरीरबाट निस्केको मृत्यु आभाले कोमल घाँसलाई तुरुन्तै पहेलो बनायो, मानौं जीवनको सास तत्काल बाहिर तानियो।
ज्याiang नि also पनि सारिए, उनले पहललाई सजिलै हस्तान्तरण गरेन।
यद्यपि, आँखा झिम्काउँदा ती दुई व्यक्ति एक अर्कामा थिए र तिनीहरूका मुट्ठीहरू एक अर्कामा थिए।
डरलाग्दो आवाज बहिरा थियो, स्टिलको दुई टुक्रा जस्ता, थप्पड मारेर, गुज्रिरहेको आवाज बनाउँदै।
ज्याiang निing हिचकिचाएनन्, तर अर्को पन्च। जी डाओ बक्सि technique टेकनीकको यस समयमा कुनै रिजर्भेसन छैन। खोल्ने र बन्द हुने बलको साथ, उहाँ साहसी हुँदै दानव राजालाई दौडिनुभयो र उसलाई सीधा लक गर्नुभयो।
यो यस्तो छ कि त्यहाँ एक प्रकारको उर्जा छ, एक अन्तरिक्ष क्षेत्र बनाउँदै, यसमा शैतानलाई लक गर्दै।
शैतानको पनि त्यहि हो, र ज्याiang निing दृढ रूपमा बन्द छ!
आज यो कि त तपाईं वा म हो। त्यहाँ पस्न सधै कोही हुन्छ। दियाबलले जान्दछ कि जो पतन हुन्छ उनी ज्याiang निing हुनुपर्छ।
उसले सोचेन कि एक नश्वर शरीर आफैसित तुलना गर्न सकिन्छ!
यद्यपि उसले आफ्नो शक्ति पूर्ण रूपले पुन: प्राप्ति गरिसकेको छैन, यो राम्रो समय हो कि आफैलाई यो डबल विद्यार्थी प्रयोग गर्न दिनुहोस् यदि यो राम्रो कार्य गर्दछ भने!
उसको आँखा घुम्न गयो, ज्या J निingको हर चाल समातेर।
ज्याiang निingको मुट्ठी एकदम चाँडो छ, र साधारण मानिसहरूले पनि उप-चित्रहरू देख्न सक्दैनन्। प्रत्येक पंचमा डरलाग्दो शक्ति हुन्छ। यदि यो हिट भयो भने यसले निश्चित रूपमा घातक घातकता सिर्जना गर्दछ।
तर शैतानले यी सबै देख्न सक्छ!
उनले देख्न सके कि ज्या J निingको प्रत्येक पञ्चमा भएका सूक्ष्म परिवर्तनहरू ढिलो गति जस्तै थिए। उसको डबल विद्यार्थीमा लुक्नको लागि केहि पनि थिएन।
यो धेरै स्पष्ट छ!
"तपाईंको मुट्ठी एकदम ढिलो छ!" को
शैतान हाँसे, र डबल विद्यार्थी अधिक र अधिक मन परायो।
ऊ लोभी ब्वाँसोको लागि पर्खिरहेको थियो, र यकिन छ, उसले गलत प्रतीक्षा गरेन। यस डबल विद्यार्थीको साथ, आफ्नो शक्तिशाली राक्षस आत्माको साथमा, स्वर्गीय दरबार गइसकेको छ, उसलाई कसले रोक्न सक्छ?
ऊ अन्तिम वसन्त नआउन्जेल कुर्दै, बाँकी आत्मालाई पूर्णतया निको पार्छ, फेरि शिखरमा चढ्छ, र साँचो अमरत्व प्राप्त गर्दछ। अरू कसैले यस संसारमा उनको बारेमा केहि गर्न सक्दैन?
यो कुरा सोच्दै, शैतानको आँखा चिसो र अहंकारी भयो!
“छिटो, हतार गर्नुहोस्! हाहााहा! "
"तपाइँको मुट्ठी यति ढिलो छ, तपाइँ अझै मलाई मार्न चाहानुहुन्छ?"
"ज्याiang निing, ज्याiang निing, मानवको नजरमा, तपाई अजेय हुनुहुन्छ, तर वास्तविक बलियो, तपाईलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन!" को
शैतानले ज्याiang निingको अपराधलाई बेवास्ता गर्दछ र शब्दहरूसहित उत्तेजित पार्दै, निर्भयताका साथ। " हुन पनि, मानिस एक मानिस हो र ईश्वरहरूसित तुलना गर्न सकिंदैन। ”
"तपाईको मतलब, तपाई ईश्वर हुनुहुन्छ?"
ज्याiang निing फुंसे र अर्को लामो मुट्ठी बाहिर निस्के र राक्षस राजाले समाते। “तब यदि मैले तपाईंलाई मारें भने, देवताहरूलाई पनि मार्नु हुँदैन! “
उसको मुट्ठी अचानक फुटेर फुट्न थाल्यो र त्यसले शैतान मालिकलाई केहि चरणहरू पछि हिलायो।
शैतानले मतलब गरेन।
"तपाईंसँग यस बक्सि technique प्राविधिकमा केही छ, तर यो दुखद हो कि तपाईंले गलत प्रयोग गर्नुभयो।"
उनले हल्कासँग भने, "तपाईले यो बक्सिंग टेक्निकको दशौं भाग पनि प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न।"
जियांग नि pका विद्यार्थीहरू अलिकति संकुचित भए।
जिओ दओ मुट्ठी जुन उसले यो क्षणमा गरिरहेको छ ऊसँग जी डाओ फिस्टको गहिरो समझ छ, तर दानव राजाले भने कि उनले जिओ दाओ मुट्ठीको दशौं भाग गरेन?
"यस्तो देखिन्छ कि तपाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ।"
ज्याiang निing गुनगुनाउँदै भने, "त्यसोभए, के तिमी यो मुट्ठीले टुक्रा-टुक्रा पारियौ?"
यस्तो देखिन्थ्यो कि जिiang निing सही छ, दानव राजाको अनुहार डूब्यो र ऊ चिसो सुन्दरी छ।
“तपाई साँच्चिकै हुनुहुन्छ
मृत्युको खोजी गर्दै! ” अचानक, दानव राजाको गति फेरि बढ्यो, र यस पटक उनले आक्रमण गर्न अग्रसर गरे।
चाg्क्वानले तुरुन्तै एउटा डरलाग्दो ब्लेड जस्तै धारदार पंजेमा परिणत भयो, ज्याiang निingको टाउको तिर जान्छन् घातक चालहरू, क्रूर र दमनकारी, जिiang निing साह्रै डराएनन्, र अझै पनि शैतानको बिरूद्ध लड्न आफ्नै तरिका प्रयोग गरे।
उसलाई थाहा थियो कि ब्वाँसो-लालची भारी शिशु पाउने दानव राजा अब पक्कै पनि शक्तिशाली छ।
यी आँखाहरूले शैतानले धेरै चीजहरू देख्न सक्छ जुन उसले पहिले देख्न सक्तैन।
तर केहि चीजहरू, यी आँखाले पनि, देख्नको लागि यो सक्षम नहुन सक्छ!
अचानक जियांग निingले अचानक एउटा मुक्का खडा गरे तर डेमोन किंगले हावामा उडाए। उनले भर्खर जियांग निingले यो चाल प्रदर्शन गरेको देखेका थिए, त्यसैले उनले फेरि हिम्मत गरे।
उनले तुरुन्तै कदम चाल्नुभयो। जियाiang निingले यो चाल प्रयोग गरेको ठीक पछि, उनले थोरै त्रुटि देखेका थिए, त्यो भन्दा पहिले कि त्यस व्यक्तिको तुलनामा ज्याiang निingमा यस पंचको सार थिएन।
शैतान चिच्यायो, आफ्नो हातको आकार बदल्दै, धारि छुरीमा परिणत हुँदै, ज्याiang निingको आक्रमणलाई वेवास्ता गर्दै र उनको मुटुमा सीधा घोचे!
यो एक दोष छ!
उसले यो धेरै पहिले देखेको थियो!
डबल विद्यार्थीहरू एकीकृत छन्, समय सही छ, र गति अचम्मको छ!
जियांग निing यस पटक रोक्न सकेन, र शैतान उनको मुटु मा हाँस्नुभयो।
तर उसको हातबाट मात्र छेडियो, खाली छेडियो!
ज्याiang निing गयो?
लगभग तत्काल, Jiang Ning अचानक आफ्नो शरीर मापन। उसले भर्खरै भर्खरै ल्याएको त्यो चलचित्र फेनिन्छ?
र वास्तविक आक्रमण यहाँ छ!
ज्याiang निingले पन्चमा पटक पटक मारा!
स्पष्ट आवाजको साथ, दानव राजा आफ्नो अनुहारमा रगत रातो छोडेर बाहिर उडे। ऊ रोकिनु अघि अलि अप्ठ्यारोमा पर्यो, ज्याiang निing रिसाएर हेरिरहेको थियो, उसलाई खान चाहन्छु!
“तपाईं मुट्ठीको दशौं भन्दा पनि कममा पन्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले ती सबै बुझें भने, के तपाईं चाँडो मर्नुहुनेछ? ”
ज्याiang निingले आफ्नो मुट्ठी हेरे र शैतानलाई तान्न बिर्सेन। "किन, यो धेरै रिसाएको छैन, धेरै अनिच्छुक।"
"तपाईंको भारी शिष्यहरू धेरै राम्रोसँग प्रयोग भएको देखिदैन।" को
आफ्नो शरीरको धूलोदेखि डराएर सैतान उठयो। उनको आँखा सँधै जियiang निing मा केन्द्रित थियो, र एक अजीब मुस्कान उनको मुखको कुनामा देखा पर्‍यो, जुन मौलिक देखिन्थ्यो। ख्याल नगर्नुहोस्
"यो केहि थोरै हो, तर यी पर्याप्त छैनन्।"
उसको डबल विद्यार्थी फेरि अलग भयो, र ज्याiang निingको पंच उसको दिमागमा फिर्ता आयो। यो अलि अनौंठो र अप्रत्याशित थियो। उसले यो देखेन। यस्तो देखिन्थ्यो कि डबल विद्यार्थीको पनि अन्त्य भयो। जियांग निing बस यी अन्धो स्थलहरू बुझ्न सक्दछन्।
ऊ फेरि दगुर्दै।
यो अर्को पन्च, वा उही चाल हो। जियांग निingको सुन्दरता पनि यथार्थवादी थियो, र दानव राजाले फेरि देखेनन्। ज्याiang निingले उनलाई थप्पडमा मारे र दश मिटर भन्दा टाढा उडानमा गए।
उसको अनुहारको एकपट्टि मुट्ठी प्रिन्ट छ र अर्कोतिर थप्पड प्रिन्ट।
पेन डेमोनले कुनै वास्ता गरेन, तर लाजले उनलाई टाँसियो, लगभग खाने मान्छेहरू!
“You! तपाईं धेरै साहसी हुनुहुन्छ! "
ऊ गर्जन गर्‍यो, उसको आवाज गुज्रिरहेको गर्जनको जस्तो थियो, "जिiang निing, आज म तिमीलाई मार्नेछु!"
"केवल यो नगर्नुहोस्, यो गर्नुहोस् !? रन फुरान बन्द भयो? "
ज्याiang निingका शब्दहरू गिल्लाले भरिएका थिए र शैतानलाई क्रेजी चाहिएको थियो, उसलाई थाहा थियो कि जिiang्ग निingको मुटुमा अन्धकार छ, र ऊ कसरी उसलाई चिढाउने भनेर सोच्दै थियो, तर यस्तो देखिन्थ्यो कि जिiang निingले उनलाई उत्तेजित गरिरहेछन्।
ती दुई व्यक्तिहरू फेरि एक अर्कासँग झगडा गरे, मुट्ठी र खुट्टा माझको टक्कर पशु जस्तो टक्कर भएको थियो, र एक्लो बहराउने आवाज अचम्मको थियो!
यस क्षणमा, यो ह्यारिसन र अन्यहरू ढु the्गाको गठनमा थिए, सबै रगत द्रुत गतिमा थियो, जहाँ उनीहरूले त्यस्तो भयंकर युद्ध दृश्यहरू देखे।
ह्यारिसनले लामो सास लिए, "हाम्रो किंग क Kong्ग डेमोन सर्कल, आज हामीले यस राक्षसलाई ग्रहण गर्यौं!